3 Siyaabood oo Ganacsigu ugu halgamayaan Mobile | Martech Zone
3 Siyaabood oo Ganacsigu ugu halgamayaan Mobile
Khamiis, May 31, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Korsashada mobilada ayaa cirka isku sii shareeraysa laakiin ganacsiyada yar ayaa ka jawaabaya. Kuwa imanaya natiijooyin aan caadi aheyn oo ku saabsan maalgashigooda not kuwa aan dib loo dhigin. Farriinta ku jirta sawir-gacmeedkan ma noqon karto mid cad.
Waa xeeladaha, doqon. Xitaa CIO-yada caqliga badan iyo ganacsiyada si wanaagsan loo maareeyay ayaa dhibaatooyin haysta maadaama ay soo dhoweynayaan dhaqdhaqaaqa. In kasta oo aaladaha moobiillada iyo barnaamijyadu ay cusub yihiin oo ay ku adag yihiin siyaabo aad uga duwan kombiyuutarada iyo barnaamijyada adeegga, haddana caqabadaha jahwareerka ku keenaya hoggaamiyeyaasha IT-ga waxay u muuqdaan kuwo farsamo ahaan aad uga hooseeya isla markaana ganacsi iyo istiraatiijiyad badan leh. Taasi waa sida laga soo xigtay cilmi baarista IDG
Ku soo dejiso warqadda Cad ee qoto dheer ee SAP.
Ku Dardar Xogta isla Markiiba leh RapLeaf
Maaddaama tiknoolajiyada moobiilku ay sii wanaajinayso tan waxay unoqon kartaa arrin weyn dhammaan noocyada meheradaha. Khubarada ku xeel dheer arimahan waxay si aad ah ugu fiicnaanayaan dhanka dhaqaalaha sanadaha soo socda. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka faa'iidada leh.